spy camera နဲ့ အချောင်းမခံရလေအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » spy camera နဲ့ အချောင်းမခံရလေအောင်
spy camera နဲ့ အချောင်းမခံရလေအောင်
Posted by ဘဲဥ on Feb 14, 2013 in Myanmar Gazette | 20 comments
ဒီနေ့ ချစ်သူများနေ့မှာ (နောက်ကျနေပလားမသိ)
ကာမဒါနပြုကြမယ့် အမျိုးသမီးများ ၊ မိမိတို့ ကဲချင်သလိုကဲထားတဲ့ဟာတွေကို ကင်မလာဂျီးနဲ့ခိုးရိုက်ခံရပြီး အင်တာနက်ဆိုတာဂျီးပေါ်ရောက်လာမှာ မလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့် (ပြောသာပြောရတာ ရောက်လာရင်တော့ ကျိအုံးမှာ)
အဲ့ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားလိုက်ရင် စပိုင်ကင်မလာတွေနဲ့ချောင်းရိုက်ခံရမယ့်ဘေးမှ လွတ်ကင်းအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဂျာ ( သများတော့ မစမ်းဘူးသေးဘူးတော့)၊
ရှောပင်းစင်တာ အဝတ်လဲခန်းတွေမှာ အဝတ်စမ်းဝတ်ကြည့်တတ်တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးများ အဝတ်လဲနေပုံတွေကို လဲ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်မယ့်ဘေးမှ ကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်ဗျာ၊
ဖုန်းထဲမှာ အဆိုပါဆော့ဝဲလေးကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင် စပိုင်ကင်မလာတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ ဖုန်းကအချက်သံထွက်လာပါလိမ့်မယ်ခည၊ အဲ့ဒီအခါကျတော့ သတိထားလို့ရဒါပေါ့ဗျာ၊
apk ဆိုတော့ android ပေါ့ …
ကျုပ်တို့လို ပန်းသီးတေအတွက်ရော မချိပူးလား ..
စိုးတယ် စိုးမိတယ် …စိုးရိမ်မိတော့တယ်…
ကတောက်စ် ဒါနပြုချင်တာတောင် ပြုစရာနေရာမရှိတဲ့ဘွ…
ဟို …အောက်မှာ မာမီပုဂျီးက ပြမယ်ဒဲ့
ဒါ လမ်းညွှန်စရာလား …
နင်နဲ့ဒေါ့ ခက်ဘာဒယ်အေ …
ဟိုတစ်ခါ သူကလေးက ရိပ်မိသွားတာကိုး။
အရည်းဂျီး က ခေါ်နေတယ် …
သူ့ကို အရင် ပြပြီးမှ …
စက်ကြာဝလာ တစ်ခုလုံး ဘယ်နေရာ ပြပြတဲ့ …
စက်ကြာဝလာ တစ်ခုလုံး ပြခြင်ဒယ်ဒဲ့
အဲ့လောက်ဂျီး ရက်ရောနေရင် ကျိရဲဘူးတော့
တကယ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား စမ်းပြီးပြီလား..
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ . .. မြည်သော်ရှိ မမြည်သော်ရှိ .. မှန်းစမ်း. . download တော့ ဆွဲပြီး သွားပြီ ဆရာဘဲဥရေ..
သူများတွေ အခါကြီးရက်ကြီးမှာ အလှုဒါနပြုကြတာကို…
မြင်သူ သာဓု အနုမောဒနာ ခေါ်စေဖို့ …
အင်း… ကြားရ ကြားရ နားဝမှာမသက်သာ…
ရင်ပူတယ်… ဘီယာအေးအေး တစ်ခွက်ပေး…
အူးလေး အူးအူးကျောက် (ဖားတဲ့အသံ)
အူးအူး ဘီဘီသောက်ချင်ရင် တူလေးဥဥ တိုက်မှာပေါ့လို့
ဒီမိုးကရေစီး ခေတ်ကြီးမှာ အားလုံးက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် ပြသဖို့လိုနေပါဘီ….
ဟင်… နာပို့စ်မှားပြီး မန့်မိတာလားမသိဘူး :harr:
နတ်သမီး နှစ်ထောင်အတွက် ယူသွားပြီနော်
Find ANY Hidden Camera That’s Watching You In Seconds w/ Hidden Camera Detecto
ဟုတ်ပါဘူးဂျာ … အနော်စမ်းပီးပီ … Android ဖုန်းတစ်လုံးမှာထည့် ပြီးတော့ နောက် ဖုန်းတစ်လုံးကနေ ကင်မရာ ဖွင့်ပြီးရိုက်တာ ဘာမှကို မထူးခြားဘူး … ကင်မရာ အမျိုးအစားမတူလို့လားတော့မသိဘူး … သူပြထားတဲ့ icon က cctv လို အကြီးကြီး …. ဒါပေမယ့် hidden camera ဆိုတော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လာကြတာလေ .. တော်ကြာ ဒီ application ထည့် ပြီး မရှိဘူးထင်ပြီး ပိုကဲနေမှ ဒုက္ခ …..
အဝတ်လဲခန်းတွေ တော့ ဝင်ဖြစ်တယ် ..ဝင်ခါနီး လှည့်ပတ်ပြီး ကြည့်ပြီးမှ ဝင်ဖြစ်လည်း ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ ထည့်ထားလိုက်မယ် .. ဒါနဲ့ .. အင်တာနက်ဖွင့်ထားမှ အလုပ်လုပ်တာလား ဘာလား ညာလား စမ်းကြည့်ဦးမှ … ။ spy camera နဲ့မှ .. အသံမြည်တာလား… ရုံးမှာ တပ်ထားတဲ့ ဟာတွေနဲ့ရော မြည်ဘူးလား မသိ … ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦးမယ် ။
ဟုတ်ပါ့ ၊ရဘူးထင်တယ် ၊ရိုးရိုး ကင်မရာနဲ့ ကပ်ရိုက်တာတောင် ဘာမှ ပြောဘူး၊ အသစ်အဆန်းမို့ စမ်းကြည့်တာပါ၊ ကဲစရာလဲ ရှိပါဘူးလေ၊
ဟဲ့ ဘဲဥမ ရဲ ့
ကင်မရာရှေ ့ထားပြီး နင့်အပလီကေးရှင်းကို စမ်းတာ
နင်သုံးနေကြ ဆော့ဝဲ ပေးစမ်းပါဟယ်